Karootada | November 2019
Onion Husk: Guryaha waxtarka leh ee loogu talagalay jirka aadanaha
Ugu Weyn Ee Karootada
Bacaha karinta ee jiilaalka guriga: cuntada ugu fiican
Khudaarta cagaaran waxay leedahay faa'iidooyin badan. Tani waa fursad lagu badbaadiyo xilliga jiilaalka, iyo ilaalinta fitamiinada (ka dib marka la baro, qof kastaa wuu ogyahay in khudaarta jiilaalka lagu iibiyo dukaamada ay ka duwan yihiin kuwa xagaaga ee ku jira faytamiin). Haa, iyo helitaanka kaydka ayaa noqon doona mid joogto ah. Ku saabsan haddii ay suurtogal tahay in la qaboojiyo dabacasaha, iyo haddii ay hantida faa'iido aan lumin ka dib markii defrosting, waxaan sii sheegi doonaa dheeraad ah.
Sida loo qalajiyo dabacasaha guriga
Xilliga jiilaalka, ma jiraan khudrado badan oo cusub, qiimaha kor ayuu u kacaa. Xaaladda ka jirta xaaladdan oo kale waa inay qaboojiso, qalalan tahay ama qalalan tahay. In this article waxaan fahmi doonaa sida loo qalajiyo karootada guriga. Faa'iidooyinka habka soo iibsiga Habkan soo go'aya xididka wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah: waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka qalajinta ee haboon; ma qaadan meel badan; Looma baahna in lagu kaydiyo qabowga; Badbaadinta badankeeda nafaqooyinka; had iyo jeer gacanta; waa qayb ka kooban suuqyo badan; ma dhacdo wakhti dheer sababtoo ah la'aanta qoyaan.
Juice carrot waxaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha khudaarta cagaaran sababta oo ah macdanta iyo fitamiinada. Sidaa darteed, elixir carruureed ee nolosha ayaa lagu talinayaa in ay labadaba isticmaalaan si ay u taageeraan caafimaadka wanaagsan, iyo daaweynta cuduro badan oo kala duwan. Isla mar ahaantaana waxaa si fiican loogu darey khudaarta cagaaran iyo khudaarta cagaaran.
Sidee loo sameeyaa roodhida yaryar: dabeecadda tallaabo tallaabo tallaabo ah ee goosashada jiilaalka
Cuntada diyaaradaha dabiiciga ah waxaa asal ahaan ka soo jeedaa Tunisia, laakiin si deg deg ah ayaa caan u noqotay waddankeena. Karinta ma keento dhibaatooyin aad u weyn, iyada oo qof kasta oo guri-guri leh uu yaqaano sida loo sameeyo. Ka fiirso faahfaahinta qodobbada muhiimka ah. Dhadhaminta Caviar ka soo karootada waa mid aad u faa'iido leh jirka.
Sida loo kariyo karootada Korean ah ee jiilaalka guriga: roodhi sahlan oo sawir leh
Dabacasaha Korean-style waa salad barafaysan oo saliideed, kaas oo muddo dheer lagu jeclaa dadka deggan meelaha bannaan. Tani ma aha wax la yaab leh: marka laga reebo dhadhanka macaan, saxankaan wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh. Waxaa lagu talinayaa in la cuno dadka ay cunto yaryihiin ee fitamiinada iyo walxaha raadraaca, kuwaas oo ku dhaca calool-istaagga iyo dheef-shiid kiimikaadka hooseeya, iyo sidoo kale cudurada fayruska iyo cudurada kala duwan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya ukunta digaagga iyo digaaga
Sida loo kariyo khamriga laga soocayo
Waxaan u adeegsanaa kiciyayaasha si ay u dardar-geliyaan rootida
Magaca noocyada kala duwan ee dabocase ayaa sheegaya in by tilmaamayaasha badan oo kala duwan tani waa horyaal. Marka la eego dhadhanka, faa'iidooyinka iyo dhalidda, lama barbar dhigi karo mid ka mid ah eheladiisa. In this article waxaan ku tilmaami doonaa sifooyinka noocyada ugu weyn ee Champion, xeerarka beeritaanka iyo sii kordhaya noocyo kala duwan, iyo sidoo kale ka hadla ku saabsan faa'iidooyinka ugu weyn iyo faa'iido darrada. Read More
Caleemaha kala duwan ee doofaarka doorashada "Viorica"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Karootada 2019